Umaka: ukwenza kahle | Martech Zone
Tag: nokwenza kahle
Kule nkathi yedijithali, impi yesikhala sokumaketha isishintshile online. Ngabantu abaningi abaku-inthanethi, okubhaliselwe kanye nokuthengisa kusukile endaweni yabo yendabuko kuya kokusha kwabo, okwedijithali. Amawebhusayithi kufanele abe kumdlalo wawo omuhle kakhulu futhi acabangele ukwakheka kwamasayithi nesipiliyoni somsebenzisi. Ngenxa yalokhu, amawebhusayithi abaluleke kakhulu emalini etholwa yinkampani. Njengoba kunikezwe lesi simo, kulula ukubona ukuthi ukusebenza kahle kwezinga lokuguqulwa, noma i-CRO njengoba kwaziwa, sekuye kwaba kanjani